Zụta mgbaaka gọọmentị Pokemon Go Plus sitere na Nintendo | Androidsis
Nwebeghị ike ịzụta mgbaaka gọọmentị Pokemon Go Plus si Nintendo, ọ bụ ezie na enwere ike idobe ya na Amazon
Ọ bụ ezie na ọ ka nwere ike ọ gaghị adị zụta Pokemon Go Plus mgbaaka site na NintendoIhe anyị nwere ike ime iji hụ na anyị ga-enwe otu ụbọchị nke ọrụ mmalite ya n'ime otu ọnwa, ọkachasị maka August 12, 2016, bụ idobe Pokemon Go Plus ozugbo na Amazon maka ọnụahịa ejiri n'aka 39,90 euro.
Ozugbo August 12, 2016 bịarutere, n’ime otu ọnwa site ugbu a, Amazon ga-aga n’ihu iziga ngwa ahịa ndị a chọrọ iji rụọ ọrụ chọta ebe amara gị ọkwa mgbe Pokemon dị nso na ọnọdụ anyị, nke ahụ bụ, n'ime usoro ihe omume anyị ka anyị wee nwee ike ijide ya tinye ya na nchịkọta nke onwe anyị nke Pokemons. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ onye izizi ị nweta otu n’ime ihe ndị a chọrọ ma chọọ ngwa ahịa maka egwuregwu Pokemon Go, egbula oge pịa “Nọgidenụ na-agụ nke a post” ka m na-ahapụrụ gị otu njikọ ụlọ ọrụ gọọmentị Amazon ka ị nwee nwere ike idobere gị ukara Nintendo Pokemon Go Plus mgbaaka.
Ọ bụ ezie na mụ onwe m ọ dị ka ngwa ngwa dị oke ọnụ maka ihe ọ na-enye anyị, m ghọtara na ọ bụghị oke ego, ma nyekwa m mmetụta nke Pokemon Go na-akpata n'ụwa niile, a ga-anabata ya nke ọma nke a ukara Nintendo Pokemon Go Plus mgbaaka, n'ihi ya, m na-adụ gị ọdụ ka ị ghara igbu oge ma gbaa ọsọ iji mee ndokwa maka mgbaaka gị ma ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ gị na-enweghị ngalaba Pokemons.
Ka ịnweta Debe akara aka Pokemon Go Plus mgbaaka site na Nintendo maka euro 39,90 ị kwesịrị ị pịa a njikọ ga-ewe gị ozugbo na ukara Amazon peeji nke idobere ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ọ pụtaworị dị ka ngwaahịa anaghị adị, cheta pịa bọtịnụ ahụ Tinye na ndepụta chọrọ n'ihi na Amazon gwa gị mgbe ọhụrụ nkeji na-na ngwaahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Pokémon Go » Nwebeghị ike ịzụta mgbaaka gọọmentị Pokemon Go Plus si Nintendo, ọ bụ ezie na enwere ike idobe ya na Amazon
O wutere m na m ekwenyeghi, mana ọ bụrụ na enwere ike zụta ya, n'eziokwu echekwabara m / zụta ya. Ugbu a ị gaghị enwe ike n'ihi na erere ha
ma enwere ike ịzụta ha. Ha na-ewe ụbọchị iri na anọ ka emechara akwụkwọ gọọmentị na Spain, ya bụ, site taa
Echere m na ị bụ enyi na-ezighi ezi ebe ọ bụ na Amazon dọrọ gị aka na ntị na ha agaghị enweta Stock ruo mgbe August 12 na-esote, nke ga-abụ mgbe ha malitere ụgbọ mmiri. Maka m nke a anaghị azụ ihe kama ọ na-edebe ya. N'ihi ya, aha nke isiokwu ahụ.
Mepụta GIF ndị na - emegharị ahụ na sekọnd na GIF Camera
[APK] Anyị na-egosi gị otu esi emelite Hangouts ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ọrụ ọhụụ nke ozi vidiyo tupu onye ọ bụla ọzọ